लगातारको बर्षाले गोरखामा के के भयो ? – हाम्राे गोरखा » लगातारको बर्षाले गोरखामा के के भयो ?
१६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०३:४४
जेठ १५, गोरखा । चार दिनदेखिको अविरल वर्षा पछिको बाढी पहिरोले गोरखामा भौतिक क्षति हुनुका साथै पशु चौपायाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका अनुसार शहिद लखन गाउँपालिका, सिरानचोक गाउँपालिका र धार्चे गाउँपालिकामा बर्षाले बढि क्षति पुर्‍याएको छ ।
शहिदलखन गाउँपालिका वडा नं ७ वनकालीमा धन बहादुर श्रेष्ठको एक तले कच्ची गोठ पूणर्रुपले भत्किदा गोठमा रहेको २ वटा भैसी, १ पाडो, ३ वटा बाख्रा पुरिएर मरेका छन् । यस्तै, शहिदलखन गा.पा. वडा नं. २ मनकामनामा ओम थापाको ८ कोठे पक्की घरको साईडबाट पर्खाल भाँसिदा ३ वटा कोठा जोखिममा परेको जानकारी प्राप्त भएको डिएसपि प्रकाश दाहालले बताउनुभयो । बर्षासँगैको पहिरोले घैरुङ स्थित हिमालय मा.वि.को ३० मिटर लामो पक्की कम्पाउण्ड वाल पनि भत्किएको छ ।
सिरानचोक गाउँपालिका वडा नं. ५ जरेवर स्थित हरि प्रसाद रेग्मीको जस्ताले बारेको गोठ भत्किदा एउटा भैसी घाईते भएको सोही स्थान संगै रहेको पसलमा समेत सामान्य क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले जनाएको छ ।
यस्तै, धार्चे गाउँपालिका वडा नं. १ हुल्चुकका राजु घले र लोक्पा घलेले पैयुखर्कमा चरनका लागि लगेको २१ भेडा पहिरोमा पुरिएर मरेको र ९ वटा भेडा बेपत्ता रहेका वडाअध्यक्ष दिलिप गुरुङले बताउनुभयो । माछिखोलामा स्थानियहरुले प्रयोग गर्दै आईरहेको काठको पुल(फड्के) पनि बाढीले बगाएको छ । बेनीघाट आरुघाट लार्के सडकखण्डमा निर्माणाधिन पुलका कारण बनाएको वैकल्पिक सडक बुढी गण्डकी नदीले बगाएकोमा सो सडक अवरुद्ध रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले जनाएको छ ।